Wessex ဘုရင် Egbert
သမိုင်း & ယဉ်ကျေးမှု အရေးကြီးပြည်သူ့ & Events
by အမျိုးသမီး Melissa Snell
Wessex ၏ Egbert လည်းအဖြစ်လူသိများခဲ့သည်:
Egbert အဆိုပါ Saxon; တစ်ခါတစ်ရံ Ecgberht သို့မဟုတ် Ecgbryh စာလုံးပေါင်း။ "လူအပေါင်းတို့သည်အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးမင်းကြီးသည်" ဟုခေါ်နဲ့ "လူအပေါင်းတို့သည်အင်္ဂလိပ်၏ပထမဦးဆုံးရှငျဘုရငျကို။ " လျက်ရှိသည်
Wessex ၏ Egbert များအတွက်မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်:
Wessex အင်္ဂလန်နောက်ဆုံးမှာပတ်လည်ပေါင်းစည်းခဲ့ထိုကဲ့သို့သောအစွမ်းထက်နိုင်ငံတော်သို့စေရန်ကူညီပေးခြင်း။ ထို့အပြင် Mercia အောင်နိုင်မှစီမံခန့်ခွဲသူက Essex, Kent, Surrey နှင့် Sussex ၌ရှင်ဘုရင်အဖြစ်လက်ခံခဲ့ပါသည်သောကြောင့်နှင့်အချိန်အဘို့, သူက "အားလုံးအင်္ဂလန်၏ပထမဦးဆုံးရှငျဘုရငျကို။ " ဟုခေါ်ခဲ့ပြီး
မွေးဖွားခဲ့ပြီး: က c ။ 770
ကွယ်လွန်သွား: ထားသော 839
Wessex ၏ Egbert အကြောင်း:
ဖြစ်ကောင်း 770 အဖြစ်အစောပိုင်းပေမယ့်ဖြစ်နိုင်ခြေအဖြစ်နှောင်းပိုင်းတွင် 780 ကဲ့သို့မွေးဖွား Egbert Ealhmund (သို့မဟုတ် Elmund) ၏သားကြီးတစ်ဦးသည်ရှင်ဘုရင်ခဲ့ Anglo-Saxon Chronicle အဆိုအရသူကို, Kent နီးပါးဘာမျှသူ၏အသက်တာ၏လူသိများသည် 784. အတွက် တက်သူသည်မိမိအကြောက်မက်ဖွယ်မဟာမိတ်များ၏အကူအညီဖြင့်အနောက်နိုင်ငံများ Saxon ရှငျဘုရငျသ Beorhtric, အ Mercian ရှငျဘုရငျသ Offa အားဖြင့်ပြည်ပရောက်သို့မောင်းနှင်အခါ 789, ရန်။ ဒါဟာသူများ၏တရားရုံးမှာအချိန်အတန်ကြာသုံးစွဲခဲ့ကြပေမည်ဖြစ်နိုင် Charlemagne ။
နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် Egbert လာမည့်ဆယ်စုနှစ်သူ့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲလှုပ်ရှားမှုများနက်နဲသောအရာတခုကိုဆက်လက်တည်ရှိရှိရာဗြိတိန်, ပြန်သွားကြ၏။ 802 ခုနှစ်တွင်သူ Wessex ရှင်ဘုရင်အဖြစ် Beorhtric ဆက်ခံခြင်းနှင့်လွတ်လပ်သောအုပ်စိုးသောမင်းကဲ့သို့မိမိကိုမိမိတည်ထောင်သည့် Mercian အဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့်နိုင်ငံတော်သို့ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ နောက်တကြိမ်, သတင်းအချက်အလက်ပမာဏမှာဖြစ်ပြီး, ပညာရှင်များအမှန်တကယ်လာမည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းရာအရပျကိုယူသောအရာကိုအဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးရှိသည်။
ဒါမှမဟုတ်အကြောင်းကို 813, Egbert (ထို Chronicle အဆိုအရ) "အနောက်ဘက်မှအရှေ့ဘက်ကနေ Cornwall အတွက်ပျက်စီးမှုများပျံ့နှံ့" ။ ဆယ်နှစ်အကြာသူ Mercia ဆန့်ကျင်တဲ့ကင်ပိန်းစတင်ခဲ့နှင့်အောင်မြင်ခြင်းသွင်းယူသော်လည်းသွေးထွက်သံယိုစျေးနှုန်းမှာ။ Mercia အပေါ်သူ၏ကိုင်စမ်းသဘောဖြစ်ခဲ့သည်ကား, မိမိစစ်ရေးကြိုးပမ်း Kent, Surrey, Sussex နှင့် Essex ၏သိမျးပိုကျလုံခြုံ။
825 ခုနှစ်တွင် Egbert Ellendune ၏တိုက်ပွဲမှာ Mercian ရှငျဘုရငျသ Beornwulf လုပ်ကြံ။ ဤသည်အောင်ပွဲ Mercia ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာ Wessex ၏တန်ခိုးပြုစုပျိုးထောင်, အင်္ဂလန်မှာအာဏာချိန်ခွင်လျှာကိုပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ လေးနှစ်အကြာတွင်သူ Mercia အောင်နိုင်လိမ့်မည်ဟု, ဒါပေမယ့် 830 အတွက်သူ Wiglaf ကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ သို့တိုင်, Egbert ၏တနျခိုးအခြေစိုက်စခန်းသည်သူ၏တစ်သက်တာကာလအတွင်းအင်္ဂလန်မှာပြိုင်ဘက်ကင်းခဲ့ပါတယ်နှင့် 829 အတွက်သူအားလုံးဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ "Bretwalda," ကိုအုပ်စိုးသောမင်းကိုကြွေးကြော်ခဲ့သည်။
ပိုများသော Egbert အရင်းအမြစ်များ:
Anglo-Saxon Chronicle အတွက် Wessex ၏ Egbert
Anglo-Saxon Chronicle, စာမျက်နှာနှစ်ခုအတွက် Wessex ၏ Egbert
Web ပေါ်ရှိ Wessex ၏ Egbert
ပုံနှိပ်ပါအတွက် Wessex ၏ Egbert:
အောက်က link ကိုသင်ဒေသခံစာကြည့်တိုက်ကနေရယူကူညီရန်စာအုပ်အကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကရှာတှေ့နိုငျရှိရာအွန်လိုင်းမှစာအုပ်ဆိုင်, ရန်သင့်အားယူပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသင်ဖို့အဆင်ပြေအဖြစ်ပေးအပ်လျက်ရှိ၏ အမျိုးသမီး Melissa Snell မဟုတ်သလိုအကြောင်းမသင်ဤ link ကိုတဆင့်လုပ်ကိုမဆိုဝယ်ယူမှုများအတွက်တာဝန်ရှိသည်။
Saxon အင်္ဂလန်၏ Warrior ဓမ္မရာဇဝင်
Ralph Whitlock အားဖြင့်
အင်္ဂလန်၏အလယ်ခေတ် & Renaissance ဧကရာဇ်
အလုပ်အကိုင်, အောင်မြင်မှုအားဖြင့်အညွှန်းကိန်း, ဒါမှမဟုတ် Society မှာအခန်းက္ပ
ဤစာရွက်စာတမ်း၏စာသား 2007-2016 အမျိုးသမီး Melissa Snell ©မူပိုင်ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျနေသမျှကာလပတ်လုံးအောက်က URL ကိုထည့်သွင်းပါသည်အတိုင်း, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသို့မဟုတ်ကျောင်းအသုံးပြုမှုအတွက်ဤစာရွက်စာတမ်းကို download လုပ်ပါသို့မဟုတ် print ထုတ်လိမ့်မည်။ ခွင့်ပြုချက်အခြား website တွင်ဤစာရွက်စာတမ်းမျိုးပွားဖို့ခွင့်ပြုမထားပေ။ ထုတ်ဝေခွင့်ပြုချက်အဘို့, အမျိုးသမီး Melissa Snell ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ဤစာရွက်စာတမ်းများအတွက် URL က:
သင်ကအန်းဖရန့်နှင့်သူမ၏ဒိုင်ယာရီအကြောင်းကိုသိမနေပါနဲ့5အရာ
ဘိုင်ဇင်တိုင်းအင်ပါယာ Alexius Comnenus ၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ profile
နာမည်ကျော်အာဖရိကန်အမေရိကန်အမျိုးသားများနှင့် 20 ရာစုအမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်
သမိုင်းနေ့ - မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းသတင်းရပ်ကွက်များ
2006 - ထိပ်တန်းကျောင်းဆင်းပွဲသီချင်းများ
NLHE Poker ဆိုတာဘာလဲ
ဇာတ်ကောင် Sketch (ရေးစပ်သီကုံး)
သင်ကဆဲလ်ဖုန်းနှင့်အတူပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက် Pop နိုင်သလား?
အပိုင် Pronoun အဓိပ္ပာယ်နှင့်ဥပမာများ
ဒီတော့ Far 2015 ၏ထိပ်တန်း 25 ပေါ့ပ်သီချင်းများ
စာတန်ကောငျးကငျတလူစီဖာ, မာရျနတျ Demon လက်ခဏာ
တစ်ခုခုပြည်သူ့ဒိုမိန်း Is လျှင်ပြောပြပါလုပ်နည်း
လိင်နှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့ခရစ်ယာန်ဆယ်ကျော်သက်ပြောဆိုရန်ကဘယ်လို
အစာခြေစနစ်: အာဟာရ Absorption
သြဂတ်အမျိုးသားအသင်းဝင်: လျှောက်ထားခြင်း, ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များ
လီယိုပတ်ထက Black ခဲ့သလား အဆိုပါအထောက်အထား Pro နဲ့ကွန်းအလေးချိန်